Tatoazy Fern sy ny dikany | Ny fanaovana tatoazy
Ny tatoazy Fern dia safidy tsara raha mitady zavamaniry hafa manaingo ianao. ary izany kosa dia manana dikany mahafinaritra. Raha te hiala amin'ny ya ianao kilasika tombokavatsa raozy, voninkazo lotus na daisy, felotra dia hevitra tsara. Ho fanampin'izay, azontsika atao ny mampiditra an'ity karazana tatoazy ity ao anatin'io sokajy io tatoazy minimalista izay efa noresahintsika tamin'ny fotoana maromaro.
Ary izany ve ny ankamaroan'ny olona manapa-kevitra hanao tatoazy amin'ny fern, mifidy tattoo amin'ny loko mainty, tsotra ary maivana be. Raha fintinina, tatoazy kanto sy tsotra. Tonga lafatra ho an'ny lahy sy ny vavy. Fa inona no dikan'ny tombokavatsa? Araka ny efa nolazainay teo aloha, manana dikany tsara izy ireo izay hamporisika anao hisambotra iray amin'ny hoditrao. Manaraka izany dia hiresaka momba ny dikan'ireny zavamaniry liana hahafantatra ireny izahay ary hanome anao hevitra vitsivitsy hanentanana anao amin'ny endrika manaraka.
1 Ny kapoka, karazan-javamaniry mahavariana
2 Hevitry ny tatoazy Fern
2.1 Foko sy angano
2.2 Ferns tamin'ny andron'i Victoria
3 Hevitra momba ny tatoazy Fern
3.1 Tatoazy ambadika amin'ny lamosina
3.2 Ferner fern
3.3 Ny zera amin'ny ambaratonga faharoa
3.4 Hoditra tsotra amin'ny tanana
3.5 Ferner realist
3.6 Miaraka amin'ny zavamaniry hafa
4 Fern miaraka amin'ny henna
5 Sarin'ny Tattoos Fern
Ny kapoka, karazan-javamaniry mahavariana
Mampiavaka ny sombin-kazo amin'ny karazan-javamaniry tena hafahafa, tsy misy voa na voninkazo, izay mamerina amin'ny tsilo. Ny spores dia tazonina ao anaty karazana sachets, antsoina hoe sori, eo anoloana ny ravin'ny zavamaniry. Rehefa tonga ny fotoana, aorian'ny fahamatorana, misokatra ny sori ary mivoaka ny spore.
Ny ankamaroany dia maniry any amin'ny faritra be mando ary misy karazany maro. Ny tena mahazatra dia manana lelany miendrika tsofa, na dia misy ireo manana lelany kely kokoa aza ary na dia tsy misy lelany aza, fa misy tahony miendrika tahon-by violon. Zavamaniry ravina izy ireo, izay maniry ao anaty ala, miaraka amin'ny loko manomboka amin'ny maitso mainty ka hatramin'ny emeraoda mahery.
Hevitry ny tatoazy Fern
Fern manana fifandraisana majika tsara miankina amin'ny kolotsaina malaza. Toy ny zavamaniry hafa toy ny jirofo, ny hombo dia omena toetra mba hisarihana ny vintana sy ny harena ho an'izay rehetra manana izany. Ho fanampin'izany, ny burlisitra ao an-trano dia hevitra tsara satria amin'ny kolontsaina maro dia milaza izy ireo fa manome hery fiarovana ho an'ny trano sy ho an'ny olona monina ao aminy.
Foko sy angano
Resahina ihany koa fa Zavamaniry ampiasain'ny foko sasany hiadiana amin'ny fanahy ratsy. Ary na dia, amin'izay azoko novakiana aza, ny zera dia zavamaniry manintona orana, na dia tsy mahagaga aza amin'ity lafiny ity, satria any amin'ny faritra sy ambanin'ny toetr'andro no ahitana an'io zavamaniry io ianao.
Ny sambo dia mifandray amin'ny angano Slavika marobe, anisan'ireo fanta-daza indrindra, ilay iray milaza fa amin'ny alina fohy indrindra amin'ny taona ihany izy ireo no mamony. Nilaza i Legend fa raha mahita voninkazo fern ianao (zavatra tena sarotra, raha ny tena tsy azo atao!) Ho tsara vintana ianao amin'ny fiainanao rehetra.
Ary misy angano iray hafa ihany koa, amin'ity fiteny finoa ity, milaza fa raha mahita ny voninkazo amin'ny fern ianao dia ho lasa tsy hita maso ary mandeha amin'ny toerana iray harena iray no miandry anao voahodidin'ny Wisps...
Ferns tamin'ny andron'i Victoria
Farany, Mahaliana ny manamarika fa, tamin'ny andron'ny Victorian, dia nisy lamaody mifandraika amin'ny felotra izay nandravahana ny karazan-javatra rehetra (manomboka amin'ny seramika, hatramin'ny lamba, boky ary koa sary sokitra) miaraka amin'ity karazan-javamaniry ity, na tena izy, maina na voasarika. Ity fironana ity dia nitarika ny fandalinany lalina sy sary mahafinaritra sasany amin'ny asa mifandraika amin'ity karazana zavamaniry ity.
Hevitra momba ny tatoazy Fern
Ny hatsaran-tarehy amin'ny felotra, sy ny karazany, dia afaka manome hevitra be dia be antsika ka ny endritsika dia miavaka sy tany am-boalohany. Ireto misy hevitra vitsivitsy izay antenainay hahasoa anao:
Tatoazy ambadika amin'ny lamosina
Ny lamosina dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra ahafahanao mahazo iray amin'ireo zavamaniry mahafinaritra manao tombokavatsa. Ny geometry ny lelany dia toa tsara manaraka ny lamosinaHo fanampin'izay, afaka milalao ny maintso maintso an'ny ravina sy ny lokon'ny mena ianao. Ary azonao atao ny misafidy fomba tena azo antenaina kokoa, toa ilay eo amin'ny sary, na misafidy takelaka hosodoko amin'ny loko mainty sy fotsy ...
Mazava ho azy io dia iray amin'ireo fitambarana mahaliana indrindra ho hitanao. Afaka mitoka-monina na miaraka aminy ny felotra, na dia zava-dehibe aza, mba hisongadinan'ny zavamaniry sy ho hay tsara, tianao ny DJ amin'ny sary: ​​saraho tsirairay ny ravina, mitahiry ny endriny mahafinaritra sy telozoro.
Ny zera amin'ny ambaratonga faharoa
Indraindray dia tsy ny ferner no mpiorina amin'ny tombokavatsa fa azo ampiasaina ho toy ny mpanakanto vahiny. Ao anaty lalina izy ireo, noho ny endrik'izy ireo, afaka manome kilalao betsaka izy ireo na miloko na mainty sy fotsy, izy ireo no mpamatsy tonga lafatra hanatsara ny zavamaniry nofidinao ho protagonist.
Hoditra tsotra amin'ny tanana
Efa voalazantsika ve fa ny endrik'ireo trondro dia mety amin'ny tatoazy? Ny fahatsorany koa dia mety amin'ny tatoazy toy ny amin'ny sary. Samy manome fahatsapana fiainana sy fihetsika mahafinaritra tokoa. Safidio ny volom-boaloboka mahazatra na mandehana iray miaraka amin'ny ravina boribory kokoa sy ny tahom-boaloboka ho an'ny fiovana kely.
Tsy misy isalasalana, ny mpanjakan'ny tombokavatsa fern dia izay miorina amin'ny famolavolana zava-misy an'ity zavamaniry ity. Na izany aza, na dia mitombina aza ny zava-misy dia aza manilika ny fanomezana fikitika hafa azy mba hahatonga azy ho kanto kokoa, ohatra, mikasika ny lokon'ny rano na ny fofona, toa ilay eo amin'ny sary. Azonao atao aza ny mandray aingam-panahy avy amin'ny sary taloha Victoria izay noresahintsika teo aloha momba ny fikasihan-tanana taloha.
Miaraka amin'ny zavamaniry hafa
Drafitra somary hafa amin'ny an'ny fern ho faharoa izay noresahintsika teo aloha ny fampifangaroana azy amin'ireo zavamaniry hafa. Noho izany, endrika kely maromaro no atambatra, miaraka amin'ny toerana malaza, amin'ny toerana iray ihany (amin'ity tranga ity, ny sandry, na dia mety ho ny tongotra, ny vozona ...) aza, toy ny sombin-tsarimihetsika, hampitana tena hatsarana maoderina sy estetika. original.
Fern miaraka amin'ny henna
Tsy afaka nanadino ireo volom-borona henna izahay. Afaka mahazo tatoazy ianao amin'ny fanarahana an'io fomba io sy amin'ny alàlan'ny aingam-panahy avy aminy. Araka ny hitanao, ny volavolan'ny henna henjana sy marefo dia toa tsara amin'ny felatanana, ary avelao ny hamolavola tena, tena mangatsiatsiaka, zavatra sarotra kokoa ary miaraka amin'ny fomba mahavariana.
Manantena izahay fa liana amin'ny dikan'ny tatoazy fern ianao ary nanome anao hevitra vitsivitsy ho an'ny tatoazy manaraka. Lazao aminay, manana tombokavatsa amin'ity fomba ity ve ianao? Misy olona tianao manokana ve? Mihevitra ve ianao fa manana hevitra izahay? Aza hadino fa afaka milaza aminay izay tadiavinao ianao, noho izany, mila mamela hevitra fotsiny izahay!
Sarin'ny Tattoos Fern
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy voninkazo sy zavamaniry » Tatoazy Fern, tsotra sy kanto
Tatoazy oliva sampana, mariky ny fandriam-pahalemana na fandresena